यस्तो भिडियो सार्वजनिक भएपछि त’नावमा यी नायिका ! – List Khabar
Home / समाचार / यस्तो भिडियो सार्वजनिक भएपछि त’नावमा यी नायिका !
यस्तो भिडियो सार्वजनिक भएपछि त’नावमा यी नायिका !
admin January 8, 2022 समाचार Leaveacomment 73 Views
बलिउड अभि’नेत्री एवं पूर्व पो’र्नस्टार सन्नी लियोनी आफ्नो नयाँ गीतका कारण विवादमा तानिएकी छिन्। उनको भर्खरै रिलिज भएको मधुवन बोलको गीतले हिन्दू धर्मको भावनामाथि ठेस पुर्याएको भन्दै मानिसहरूले उक्त गीतको विरोध गरेका छन्।
‘यो गीत निकै लज्जास्पद छ। मधुव’नमा राधा यस्तो नाच नाच्दिनन्, तिमीलाई यस्तो गीत बनाउँदा लाज हुनुपर्ने हो सन्नी’ सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा एक नेपालसमचारपत्रमा खबर छ । प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्। त्यस्तै, अर्का प्रयोगकर्ताले राधा नर्तकी नभई कृष्णको भक्त भएको जनाउँदै यस प्रकारको वा’हियात प्रस्तुति दिनुभन्दा राधा–कृष्णको पूजा गर्न सन्नीलाई सुझाएका छन्।
केही समयअघि सन्नीले कनिका कपुर’का साथ बेबी गर्ल बोलको गीत ल्याएकी थिइन्। बेबी गर्लबाट तारिफ पाएकी सन्नीले नयाँ गीत मधुवनबाट भने दर्शकको आलोचना खेप्नुपरेको छ।
Previous आँँखा वरिपरि ‘डार्क सर्कल’ छ? यी खानेकुरा खानुहोस्
Next पुष २५ गते आइतबार, हेर्नुहोस् यस्तो छ तपाईको राशिफल अनुसारको भाग्यफल!